Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad iyo Taranka mustaqbalka
Ku saabsan Ilma soo ridka
Sida Loo Isticmalaa Kaniinka
Ka Hor Isticmaalka KaniinkaSida Loo Isticmalaa Kaniinka Ilma soo ridkaKa Dib Isticmaalka KaniinkaInta u dhaxaysa 10 iyo 13 Todobaad
e – Barasho
Kozi za mtandaoniChiti cha Mafunzo
Su’aalaha lanaga Weydiiyo Badanaa Kiniinka Ilmo iska soo TuuristaKu saabsan anagaBlog
Ku saabsan Ilma soo ridkaSida Loo Isticmalaa Kaniinka
Shuruucda Ilmo soo rididda ee Waddankae – Barasho
Uur ayaad yeelan kartaa mar labaad isla sided cisho ka dib ilmo xaaqista. Hadii aad galmo samaynayso waa inaad isticmaashaa walxaha uurka joojiya si aad uga hor tagto uur kasta oo ku talagal ahayn.
Dumarka qaar, xanuunku waa xoog- aadna way uga xanuun badan tahay xataa casiraada caadada ( hadii aad leedahay casiraad caado) dhiig baxuna wuu ka badan yahay ka xiliga caadada. Waxa laga yaabaa inay kaa soo baxaan guntimo dhiig ah oo leeg liinta saacadaha hore ka dib markaad qaadato misoprostol. Dumarka kale, casiraadu waa dhex dhexaad dhiig buxuna waa sida ka xiliga caadada.
Maya, isticmaal tirada isku midka ah ee kiniinka aanu kula talino qof walba. Diraasado ayaa muujiyey in guusha daawadu aaney hoos u dhigin dumarka culculus. Uma baahnid inaad qaadatid xadi ka duwan am ka badan kiniinka.
Kiniiada ka hor tagista uurka deg dega ah ( ECPs) waa amaan waana habka ugu haboon ee ka hortaga uurka ka dib galmo aan ilaashanayn. Waxay u shaqeeyaan iyagoo ka hortagaya bacriminta ( soo daynta ugxanta) ama iyaga oo ka joojinaya ugxanta iyo manida inay kulmaan. ECPs way ka duwan yihiin ilmo xaaqista dhakhtar qoray. ( oo ay ka mid tahay mifepristone iyo misoprostol). Labadan dawooyinba waxay leeyihiin muhiimad aad ah dhinaca taranka ee dumarka aduunka.
Raadso caawimo caafimaad hadii aanad dhiigbixin ama aad leedahay dhiig bax yar oo ay raacdo casiraad aad ah ( gaar ahaan garabka midigta) kaasoo aanay ibuprofen bogsiinaynin. Tani waa calaamad in ilmuhu ku samaysmay meel ka baxsan ilmo galeenka ( uur ka baxsan ilmo galeenka). Inkastooy tani tahay mid hif ah, hadana waxay noqon kartaa halis. Sidoo kale waxaad la xidhiidhi kartaa saaxiibadayo halkan www.safe2choose.org si aad ula xidhiidho la taliye tababaran oo dhinaca ilmo soo tuurista ah hadii aad ka war warsan tahay inay ilmo soo tuurstaadu tahay mid guuldaraysatay.
Uma baahnid inaad badasho xadiga ama tirada kiniinada hadii aad ogaato inaad leedahay uur mataano ah. Nidaam isku mid ah ayuunbaa loo isticmaalayaa uurka mataanaha.
Waxa jira laba ha boo macruuf ah oo ilmo xaaqis ah;
1) ilmo xaaqis dawo la adeegsado: Ilmo xaaqistani waxa la adeegsanayaa dawooyin si loo joojiyo uurka. Mararka qaar kalmadaha “ilmo xaaqista aan qaliinka ahayn” ama “ ilmo xaaqista kiniinka” ayaa sidoo kale la isticmaalaa.
2) Ilmo xaaqis qaliin ah: Nidaamka Ilmo xaaqista qaliinka ah, qof takhasusa ayaa soo faaruqin doona ilmo galeenka isagoo sii dhex maraya afaafka ilmo galeenka si uu u joojiyo uurka . Hababkani waxa ka mid ah in laga soo nuugo (MVA) oo la balaadhiyo lagana soo xaaqo (D &E).
May, inaad ilmo ku xaaqdo kinin wax adkayn doonto inaad uur yeelato mustaqbalka.
Raadso kaalmo caafimaad hadii aad qoyso laba xafaayadood oo caadi ah saacadiiba laba saacadood oo isku xiga ka dib markii aad u malaysay in aad dhaaftay uurkii. Qoyidu waxay tahay micnaheedu in xafaayadu gabi ahaanba ka buuxsamay dhiig xaga hore iyo xaga danbe, dhinac ilaa dhinac iyo dhex ilaa dhex.
Maya, uurkastaaba waa dhacdo gaar ah. Hadii aad horey u isticmaashey kiniinka ilmo iska tuurka, uma baahnid xadi badan hadii aad marlabaad u isticmaasho uurkale oo aanad rabin.
Waxaad la soo xidhiidhi kartaa kooxdayada si aad u hesho macluumaad dheeri ah halkani info@howtouseabortionpill.org.
Hadii ilma galeenkaaga uu ku jiro qalabka ka hortaga uurku (tusaale, dunta ama dheecaanka uur diyaarinta IUD), waa in lagaa saaraa ka hor daawada ilmo iska tuurista.
Ka dib markay misoprostol milanto, waxbaad cuni kartaa sidaad jeceshahay. Cunto qalalan ( tusaale. Buskud ama roodhi) waxa laga yaabaa inay kaa caawiso yalaalugada, halka khudrada cagaaran, beedka iyo hilibka cas ay kaa caawin karaan inay dib kuugu soo celiyaan macadanihii aad lumisay intii aad ku jirtay ilmo soo tuurista.
Hadii aad naasnuujineyso ilmaha, kiniinada misoborostol waxay ku sababi karaa shuban ilmaha. Si aad iskaga ilaaliso arintan, naasnuuji ilamaha , qaado kiniinka misoborostol ka dibna sug 4 saacadood ka hor intaanad naasnuujin ilmaha marlabaad.
Ka dib markay misoprostal milanto, waad cabi kartaa cabitaan kasta oo aad jeceshahay (marka laga reebo khamirga Alkoosha)
Hadii aad la nooshahay aydhis, kaliya hubi inaad degan tahay, waxaad waadataa daawooyinka ka hortaga farayska, caafimaadkaaguna wuu wanaagsan yahay.
Khamriga waa in laga fogaado inta lagu guda jiro dawaynta si looga hortago saamaynta habsamida dawada. Alkooshu waxay sidoo kale keeni kartaa xaaladaha qaar dhiig bax xad dhaaf ah dhinaca ilmo galeenka waxayna hoos u dhigi kartaa waxtarka dawooyin kale oo la qaatay si loo yareeyo xanuunka iyo caabuqa ( dumarka la tacaalaya dhibaatooyinkaa). Guud ahaan, waxa lagugula talinayaa inaad ka fogaato isticmaalka alkoosha ilaa inta aad xaqiijinayso in ilmo soo tuuristaadu ay dhan tahay oo aad dareemayso caafimaad wanaagsan.
Haddii dhiig yari kugu dhacdo (heerarka birta ee dhiigga ku yar), caddee bixiye daryeel caafimaad oo aan ka badnayn 30 daqiiqo oo caawin kara haddii aad u baahato. Haddii aad dhiig la’aani ku jirto, la tasho dhakhtar intaadan isticmaalin kiniinka ilmo iska soo ridka.
Dumarka badankooda waxay soo tuuraan uurka 4-5 saac gudahood waxayna caadi ku noqdaan mudo 24 saac gudahood ah. Waa iska caadi inaad sii aragto dhiigbax yar oo sahlan iyo calaamado ilaa iyo xiligaaga xiga ee 3-4 wiig gudahood.
Maya, isticmaalka kiniinka ilmo iskasoo tuuristu ee horaanta uurku wax halisa malaha xataa hadii horey laguugu qalay dhalmo.
Waa iska caadi inaad dareento xanuun caloosha ah, shuban, dhaxan iyo sida inaad leedahay xumad intaad ku jirto wakhtigan. Waxa lagu soo waramaa dumarka badankooda inay og yihiin markay soo tuureen uurka sababtoo ah dhiigbaxu wuu sii yaraadaa waxaanay bilaabaan inay fiicnaan aad ah dareemaan.
Dumarka qaar ayaa laga yaabaa inay u baahanyihiin nidaam qaliin hadii ay wali uur leeyihiin ka dib markii ay qaadatay kiniinka. Ogow! Dawaynta ilmo soo tuurista aan dhamayska tirnayn meel kasta waa laga heli karaa aduunka. Waxaad xaq u leedahay adeegan, xataa hadii sharciyan ilmo soo tuuristu ay xanibantahay wadankaaga.
Maya, maaha caadi (amaan) inaad isticmaasho kiniinka ilmo iska tuurista hadii aad ogtahay inaad khatar ugu jirto xaalada uurka meel ka baxsan ilmo galeenka.Maxaa yeeley waxaad gashay qaliin, waxaanu ogahay inaad nabaro ku leedahay tuubooyinka falooyinka. Taasi waa sababta uurkaagii ugu danbeeyey uu u noqdey mid ah xaalada ilmuhu ku sameyso meel ka baxsan ilmo galeenka. Tuubooyinka falobiyaanku waa meesha ukunta dhedig lagula bacrimiyo biyaha labka. Uurku wuxuu bilaabaa inuu koro oo uu dul maro tuubka ilmo galeenka. Hadii tuubkaagu nabar leeyahay, uurka hore wuxuu ku xanibmi karaa tuyuubka. Marka uu uurku koro, wuxuu sababi karaa in tuyuubku uu furmo. Hadii uu tuyuubku furmo, tani waxay ku sababi kartaa gudaha dhiig bax faro badan, taasi oo khatar nolosha ku ah. Waxaad khatar ugu jirtaa xalaad kale oo ilmuhu ku sameyso meel ka baxsan ilmo galeenka. Waa inaanad iskaa u isticmaalin kiniinada ilmo iskasoo ridka ilaa bixiye daryeele caafimaad uu hubo in uurku ku jiro ilmo galeenka, ee aanu ku jirin tuyuubka.
Marka hore, waa inaad ogaataa in badi dumarku aan ka warheyn doonin xaalad ilaa ay mareen meshiinka ultrasound. Xaaladaha uurka ka baxsan ilmo galeenka lama sadaalin karo sidaa daradeed xataa wadamada ilmo iska ridku aanu sharci ahayn dumarku waxay helikaraan nidaam sharci si usoo af jaraan uurkan.